Ndụmọdụ ndị dị mkpa maka ịkọwa data nchịkọta Google | ECommerce ozi ọma
Claudi ego | | eCommerce, SEM
Nchịkọta Google bụ otu n'ime ihe nyocha weebụ nke ị na-agaghị echefu. Na ya ọ ga-ekwe omume ịhụ n'ụzọ dị mfe ma jikọrọ ọnụ data nke okporo ụzọ ndị ọrụ, mgbanwe, ọnọdụ ebe ha si bịa, wdg. Ọzọkwa omume na mmekọrịta nke ndị ọrụ nwere yana webụ. Site na oge nleta nleta, ọnụego bounce, na peeji ndị kpaliri mmasị kachasị, wdg.
Debanye maka ngwa ọrụ a, nke bụkwa n'efu, Ọ ga-enye anyị nzaghachi ozugbo na anyị na-arụ ọrụ anyị nke ọma. Ozugbo n'ime interface, ịmara otu esi atụgharị data ahụ n'ụzọ ziri ezi ga-enyere anyị aka ikpebi ihe anyị ga-eme, ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị na-enweta nsonaazụ anyị nwere ike ịtụ anya. Ọ bụ ya mere taa anyị ga-ekwu maka ndụmọdụ ndị bụ isi maka nkọwa ziri ezi nke data na-egosi na Google Analytics.
1 Página isi
2 Ọnọdụ ndị ọrụ
3 The okporo ụzọ site na-elekọta mmadụ na netwọk
4 Okporo ụzọ na-emetụta ụbọchị ma ọ bụ oge awa ha gara web
5 Ebee ka ndị ọrụ si abịa?
6 Ngwaọrụ site na ebe ndị ọrụ jikọtara
7 Onu ogugu nke mgbanwe
Ga na ibe obibi na-enye anyị na mbụ otu n'ime ozi kachasị mkpa, nleta na weebụsaịtị anyị. N'ebe ahụ, ọ ga-enye anyị data gbasara ọnụọgụ ndị ọrụ gara na weebụsaịtị anyị, nnọkọ ahụ, ọnụego bounce na nkezi oge nke nnọkọ ahụ. Ma, olee uru data ndị a na-enye anyị?
Ga-ahụ n'okpuru ọnụ ọgụgụ ha, pasent nke ọdịiche. Na uhie ma ọ bụrụ na ọ bụ mgbaàmà ọjọọ, ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụrụ na ọ dị mma.
Ndị ọrụ. Ọ na-egosipụta ọnụọgụ ndị ọrụ abanyela na weebụsaịtị anyị. N'ụzọ doro anya, ọ ka mma inwe ndị ọrụ karịa ole na ole, mana ihe ị ga-achụ bụ ndị ọrụ dị mma. Ole na ole dị mma karịa ọtụtụ na ndị ọjọọ. Olee otú anyị pụrụ isi mara nke a? N'ihi ọnụego ibiaghachi na oge nnọkọ.
Agbanye ego Ọnụ ego bounce kwekọrọ na ndị ọrụ ahụ hapụrụ weebụsaịtị mgbe ha gara na ibe na n'ime sekọnd. Nke ahụ bụ, ha akpalibeghị mmasị, ma ọ bụ na enwere nsogbu na-emebeghị ka ịmata ihe. Onu ogugu elu elu nwere ike ibu nsogbu na anyi adighi elebara ihe anya nke oma, ma ọ bụ na e nwere nsogbu nhazi. Ala pasent a, ọ ka mma na ọ bụ, ọ pụtara na ndị mmadụ na-etinye oge na weebụ.
Oge nke nnọkọ ahụ. Ozi ọzọ nke na-egosi ogo ndị ọrụ anyị. Ogologo oge nke ndị ọrụ ka elu, akara ka mma. Nke a sụgharịrị ịbụ ihe na-akpali mmasị, ịmata ihe, yana ọdịnaya dị na ya bara uru. Otú ọ dị, obere oge dị obere abụghị ihe jikọrọ ya na ịme ọdịnaya dị njọ. O nwere ike ịbụ na ụdị onye ọrụ na-eleta weebụsaịtị abụghị ihe a tụrụ anya ya, ma ọ bụ na a na-ekesa ọdịnaya ahụ site na ọwa ma ọ bụ n'etiti ndị na-enweghị mmasị na ọdịnaya ahụ. Ya bụrụ otú ahụ, anyị kwesịrị ịchọ ebe ma ọ bụ ìgwè dị iche iche ebe ihe anyị na-enye dị na-amasị ndị otu a họọrọ.
Ọ bara ezigbo uru maka ikewa ndị na-ege gị ntị, ọ na-enye gị ohere ịmara mba na obodo ọbụla ndị ọrụ gị gara. O nwere njikọ chiri anya na ebumnuche na akụrụngwa nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ na-enye. N'ihe banyere blọọgụ na ọrụ nke mmasị zuru oke nke na-adabereghị na ọnụnọ ọ bụla ọzọ karịa nke ibe gị, ikekwe ọ dịghị mkpa. Ma Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị na-anwa ịchọta ndị ahịa n'otu mpaghara ma ọ rụpụtaghị nsonaazụ ahụ, ị ​​kwesịrị ịjụ onwe gị ihe anaghị arụ ọrụ. Ikekwe isiokwu ndị ahụ adịghị mma, anaghị akwalite websaịtị ebe ọ ga-ederịta ozi, ma ọ bụ ọbụlagodi asụsụ ma ọ bụ isiokwu a na-eji.
The okporo ụzọ site na-elekọta mmadụ na netwọk
Ejikọtara ya na ihe anyị kwuburu na mbụ gbasara ndị ọrụ dị mma. Kedu otu ezigbo njirimara ndị ọrụ anyị si egosipụta. "Dị “dị ka” webụsaịtị anyị n’onwe ya abụghị nkwa ọ ga - eweta nleta. Maka nke a, anyị ga-ahụ ọtụtụ ndị ọrụ karịrị ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ nweta weebụsaịtị anyị iji hụ akwụkwọ ndị na-adịbeghị anya. Ọ bụghị otu puku ndị 5.000 "masịrị" na iwepụta nleta 500, ya bụ, mmadụ 1 n'ime mmadụ iri ọ bụla, inwe mmadụ 10 nwere mmasị ma mepụta nleta 3.000, ya bụ, 750 n'ime mmadụ 1 ọ bụla.
N'otu ụzọ, bounce percent na nkezi oge nke nnọkọ ga-emesị gosi mmasi anyị na-akpọte.
Okporo ụzọ na-emetụta ụbọchị ma ọ bụ oge awa ha gara web
Achọpụtara na ngalaba ma ọ bụ isiokwu ọ bụla metụtara oge njikọ nke ndị ọrụ, dabere na profaịlụ a na-egwu egwu. Ihe na-adọrọ mmasị n'okwu ndị a bụ ịmata otu esi eji data a mee ihe mara oge awa na ụbọchị ọ ga - aka mma iji mepụta mbipụta iji nweta mmetụta ka ukwuu na mmetụta. Dabere na ebumnuche anyị, profaịlụ nke ndị mmadụ na ụdị ngalaba anyị na-emetụ aka (ụlọ ahịa, blog, oge ezumike, ụlọ ọrụ ...).
Ebee ka ndị ọrụ si abịa?
Have nwere obere ọchụchọ ọchụchọ (Google) ma ọ bụ jiri ọkwa dị mma? Kedu ka nyocha mgbasa ozi na-aga, ọnụego ndị ọrụ dị ala ma ọ bụ na-aga nke ọma? Ghọta ọwa nke ndị ọrụ anyị si abịa na-enye anyị ohere mara ka mma SEO kacha mma, ma ọ bụ mara ọ bụrụ na ndị ọrụ na-eso anyị na netwọkụ bụ ndị ọrụ dị mma. N’ebe a, ekwesighi ịkọwapụta pasent (ma ọ bụ ee, dabere na azụmahịa anyị) mana ọnụọgụ nke okporo ụzọ.
Ọ bụrụ na ebumnuche bụ ịmepụta okporo ụzọ site na mgbasa ozi mgbasa ozi n'ihi na ị bụ ụlọ ọrụ ntụrụndụ na ihe omume, dịka ọmụmaatụ, ịnwe atụmatụ mmekọrịta nke na-eme ka nleta ọbịbịa ga-abụ ihe mgbaru ọsọ anyị. Ọ bụrụ na enwetaghị nke a, ọ ga-adị mkpa iji nyochaa ihe na-eme. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na anyị nwere mmasị na ọnọdụ anyị na Google, mana pasent nke okporo ụzọ a na-eme dị obere, anyị kwesịrị ịhụ SEO na / ma ọ bụ jụọ maka ndụmọdụ ọkachamara.
Ngwaọrụ site na ebe ndị ọrụ jikọtara
Ihe ọzọ data nke Google Analytics na-enye anyị bụ ọnụọgụ nke ngwaọrụ njikọ sitere. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ilekwasị anya ma gbanwee weebụsaịtị anyị, na-enwe mmasị pụrụ iche maka ụdị ngwaọrụ nke ndị ọrụ anyị jikọtara. Inwe ihe eji agbanwe agbanwe ga-abụ mkpebi ziri ezi mgbe niile iji zere ndị ọrụ na-efunahụ ya, n'ihi ihe egwu dị ka ebe nrụọrụ weebụ, n'agbanyeghị na ọ dị mma site na kọmputa, enweghị ezigbo usoro site na ekwentị mkpanaaka, dịka ọmụmaatụ.
Onu ogugu nke mgbanwe
N'ikpeazụ, ọnụọgụ nke mgbanwe anyị na-arụzu. Ọ bụrụ nzụta, ndebanye aha, ndenye aha, wdg. Ọzọkwa Enwere ike ịhazi nhọrọ a iji kọwaa ebumnuche na ịchọpụta ihe anyị na-atụ. Site na nke a, anyị ga-enwe ike ịmata etu ọnụego ntụgharị nke web na-arụ ọrụ nke ọma.
Ọtụtụ mgbe, ha abụghị nnukwu pasent, mana ọ dị ala. Mana ekele maka usoro na ngwaọrụ ndị ọzọ, dị ka ule A / B ma ọ bụ eserese okpomọkụ, anyị nwere ike melite ogo ndị a. Enwere ike ịhazi nchịkọta Google iji tụọ dịka ọrụ anyị tụrụ anya n'aka onye ọrụ ọ bụla.
Jiri Google Analytics mee ihe ma nwee obi uto, ị ga-amalite ịhụ otu ị ga - esi na njedebe okporo ụzọ ị na - eduzi onwe gị na mkpebi gị. Enwere m olileanya na isiokwu a enyerela gị aka, na nsonaazụ gị ga-aka mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ndụmọdụ ndị bụ isi maka ịkọwa data Google Analytics